Kumanaan qof oo ku dibad-baxay safaaradda Mareykanka ee Iraq – Hornafrik Media Network
Kumanaan qof oo ku dibad-baxay safaaradda Mareykanka ee Iraq
By Liibaan Nuur	 On Dec 31, 2019
Duqeymahaas oo dhacay Axaddii ayaa dhaliyey carro iyo cambaareyn ka timid saraakiisha sare ee Iraq, hase yeeshee dowladda Mareykanka ayaa difaacday ficilladeeda, waxaana ay ka digtay inay mar kale weerari doonto.
“Uma ogolaan doonno Iran inay ku baxsato inay maleeshiyo hoos tagta u adeegstao inay ku weerarto danaha Mareykanka,” waxaa sidaas weriyayaasha u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka.
Duqeymaha Mareykanka ayaa beegsaday baqaarada hubka iyo goobaha looga taliyo kooxda Kataeb Hezbollah ee dalka Iraq iyo Syria, waxaana ku dhintay 25 qof, ayada oo tobaneeyo kale ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha Mareykanka waxay sheegeen in duqeymaha ay jawab u ahaayeen gantaal lagu soo weeraray saldhig military oo Mareykanka uu ku leeyahay Iraq, kaasi oo lagu dilay qandaraasle Mareykan ah.
Saraakiisha waxay intaas ku dareen in caddeymaha la helay ay muujiyeen in shaki la’aan ay weerarka ka dambeysay kooxda Kataeb Hezbollah.
Ra’iisul wasaaraha Iraq, Adel Abdul Mahdi ayaa Isniintii cambaareeyey duqeymaha, waxaana bayaan uu soo saaray uu ka digay in ficillada Mareykanka ay yihiin kuwa aan la aqbali karin “oo yeelan doona caqaabih halis ah.”
C/rashiid Khaliif: Haddii ay sida NISA wax u sheegtay ay u jiraan midbaa la rabay
Duqeyn culus oo ka dhacday deegaan ka tirsan G/Bari